Nhau - Ramangwana kurima - shineon horticulture mwenje
Sekureva kwaTechnavio, inzvimbo yekutsvagisa musika, musika wepasi rose wemarambi ekukura kwezvirimwa unodarika $ 3 bhiriyoni na2020 uye ichakura padanho rekukura pagore re12% na2020, zvinoreva kuti mafomu eUSD mukukura kwezvirimwa ane musika wakakura. Nekushomeka kwesimba rezviwanikwa uye kudzikiswa kwevhu rinorimwa, basa uye kudikanwa kwemafekitori emiti zvazove zvakanyanya kuwedzera - vanogona kubvisa ivhu uye nekugadzira zvimwe zvigadzirwa zvekurima nenyika isina kurimwa uye zviwanikwa zvemvura. Uye horticulture mwenje chikamu chakakosha chayo, fetiraiza yakajeka inoshandiswa panzvimbo yemakemikari mafetiraiza, magetsi ekugadzira enzvimbo anoshandiswa panzvimbo pechiedza chezuva.Iyi ndiyo kiyi yekuzadzisa goho repamusoro-soro uye inochengetedza zvakatipoteredza fekitori yemiti.
Chinyakare horticultural mwenje unonyanya kuwanikwa uchishandisa yakanyanya-kumanikidza sodium mwenje, simbi halide mwenje, uye incandescent mwenje. Aya masosi enjodzi anosarudzwa zvinoenderana neziso remunhu kuchinjika kuenda kuchiedza, uye zvirimwa zvine mwero wakasiyana wekutora, izvo zvinoita kuti simba rakawanda rezviwanikwa zvechiedza zvaparadzwa, uye kusimudzira kwekukura kwezvirimwa hakuna kuoneka zvakakwana.
Chlorophyll absorption spectra Yemunhu ziso rinotaridzika kutaridzika
Spectra yekusimudzira kukura kwezvirimwa inonyanya kutariswa pachiedza chebhuruu pa450nm uye mwenje mutsvuku pa660nm. Izvo zvinodikanwa zvekutsvuka uye bhuruu mwenje zviyero zvezvirimwa zvakasiyana uye akasiyana matanho ekukura kwezvirimwa akasiyana zvakare. Nekuda kwayo yakanaka yekuratidzira mapurasitiki, ma LED anogona kugadzirwa zvinoenderana nechero chakatarwa chakasiyana chemiti dzakasiyana.
ShineOn horticulture mwenje akateedzera akagadzira zvakanangwa zvigadzirwa zvepamhepo zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemiti.
Yakakwira photon flux kugona monochromatic mwenje zvigadzirwa.
Inochinjika kune akawanda horticulture mwenje kunyorera.
Uye zvakare, kuitira kuenzanisa izvo zvinodikanwa zvekukura kwezvirimwa nemeso emunhu, ShineOn inopa mukana wakaringana wekudyara kudiki-kwemba.
ANSI 3500K 7-nhanho, Ra90, inogona kusangana nezvinodiwa zvemwenje zvezuva nezuva, Panguva imwechete, 2.1umol / J photosynthetical photon flux kunyatsoshanda uye yakakodzera tsvuku-bhuruu reshiyo inogona kusangana nechinodiwa chekukura kwezvirimwa.
ShineOn yakazvipira kusimudzira yemhando yepamusoro horticulture mwenje masosi uye inopa mhinduro yakazara yekusimudzira uye kushandiswa kweiyo LED mumunda weiyo horticulture mwenje.